Android ဗားရှင်း - သတင်းများ၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများ၊ Androidsis
အဆုံးမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ် Operative Sistems, သော ဆော့ဖျဝဲ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကွန်ပျူတာ (သို့) မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေပြproblemsနာမရှိစေဘဲအလုပ်လုပ်စေတယ်။ Windows ကဲ့သို့သောပုံမှန်အမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်ယခုခေတ်ကဲ့သို့တစ်ခါတစ်ရံသတိမပြုမိသောအခြားသူများလည်းရှိသည်။ အန်းဒရွိုက်။ ဒီနေရာမှာလက်ရှိလည်ပတ်ရေးစနစ်များ၊ အကြံဥာဏ်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များနဲ့သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Android သည်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်တိုးတက်မှုများဖြင့်ဗားရှင်းအသစ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်း၊ အသစ်ထွက်လာမည့်ဗားရှင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလာဟလများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါမည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် Android ကိုဈေးကွက်သို့ဖြန့်ချိပြီး ၁၀ နှစ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ Google ၏လည်ပတ်မှုစနစ်သည်နှစ်များတစ်လျှောက်ထူးခြားသောတိုးတက်မှုတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်သူများပြားလာသည်နှင့်အညီဤကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အသုံးများဆုံးသော operating system ကိုအသုံးပြုကြပြီးနှစ်များတစ်လျှောက်ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးကိုထုတ်ဝေပြီးဖြစ်သည်။
Android ဗားရှင်းအသစ်တိုင်းနှင့်အတူ operating system အသစ်၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အဓိကတိုးတက်မှုများပေါ်လာသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်ရန်အတွက်ဤမူကွဲများအကြောင်းနောက်တစ်ခေါက်ဆွေးနွေးပါမည်။
Android Pie 1.0 ပါ
ပထမဆုံး operating system ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းကိုပထမဆုံးအသုံးပြုသည့်ဖုန်းမှာ HTC Dream ဖြစ်သည်။ operating system သည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်။
Gmail နှင့်ထပ်တူပြုခြင်း၊ browser၊ Maps, Calendar, Contacts, YouTube သို့မဟုတ် Google search engine စသည့်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းများကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်သည်။ Android Market (Google Play စတိုး၏ကန ဦး ဗားရှင်း) ကိုလည်းအသုံးပြုသူများရရှိနိုင်ပါသည်။ ပထမလများအတွင်းသင်သည်အက်ပ်များကိုမဝယ်နိုင်သော်လည်း
၂၀၀၉ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံး Banana Bread 2009၊ Cupcake 1.1 နှင့် Donut 1.5 တို့ကိုထပ်မံဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Android interface တွင်တိုးတက်မှုများအပြင်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့်အလယ်အလတ်ဗားရှင်းများဖြစ်သည်။ အလွန်အရေးကြီးသည်မှာ Android 1.6 Donut ဖြစ်သည်။ HTC Magic သည်ထိုအဆင့်တွင်အရေးပါဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။
၂၀၀၉ အောက်တိုဘာ ၂၆ တွင်ဒုတိယ operating system တရားဝင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ များစွာသောသတင်းများနှင့်အတူလာ။ သူတို့ထဲကအတော်များများယနေ့နေဆဲပစ္စုပ္ပန်။ ဂူးဂဲလ်မြေပုံများကိုသွားခြင်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်၊ ဘရောင်ဇာကိုလုံးဝပြုပြင်မွမ်းမံပြီး home screen ကိုယခုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
Google Maps တွင် navigation ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းသည် Android အတွက်အဓိကကျသောအချက်ဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းသည်သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင်လမ်းကြောင်းချရန် (သို့) လမ်းကြောင်းစီစဉ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်သော့ချက် function ကို။ ဒီဗားရှင်းကိုအသုံးပြုတဲ့ဖုန်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့ Galaxy S. ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ပထမဆုံးအဆင့်မြင့်။
အန်းဒရွိုက် 2.2 Froyo
လအနည်းငယ်မျှကြာပြီးနောက်၊ မေလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ဖရိုယိုရောက်ရှိလာသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်, သင်သည်အသစ်သော function များနှင့်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ operating system ကိုတိုးတက်စေရန် Google ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤဗားရှင်းသည်ပရိသတ်များသို့ရောက်ရှိလာပြီးသန်းနှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများအတွက် Android နှင့်ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုဖြစ်သည်။
Dalvik compiler, voice commands သို့မဟုတ် Adoble Flash compatibility တို့သည် operating system သစ်၏အဓိကပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သည်။ ဤစနစ်၏ဗားရှင်းဖြင့် HTC Desire သည်စျေးကွက်သို့လည်းရောက်ခဲ့သည်။ စားသုံးသူများကြားတွင်လူကြိုက်များသောဖုန်းဖြစ်သည်။
အန်းဒရွိုက် Gingerbread က 2.3
၂၀၁၀ အကုန်ပိုင်းမှာဈေးကွက်ထဲမှာ Android ဗားရှင်းအသစ်ရှိတယ်။ အကယ်၍ ယခင်များသည်စျေးကွက်တွင်တိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောခြေလှမ်းများလှမ်းခဲ့ပြီးပါကဤဗားရှင်းသည်သူတို့၏အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောတိုးချဲ့မှုပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စနစ်၏အသန့်ရှင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌။
၎င်းတွင် gyroscope သို့မဟုတ်ဘာရိုမီတာစသည့်အာရုံခံကိရိယာများကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဖုန်းများစွာအတွက်၎င်းသည်သူတို့ရရှိသောနောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အရေးကြီးသည့်အချက်လည်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းနှင့်အတူပထမဆုံး Samsung Galaxy Note သည်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။
ယခင်ဗားရှင်းသုံးလအကြာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Android ဗားရှင်းအသစ်အဆင်သင့်ရှိသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ဗားရှင်းမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည်တက်ဘလက်များအလယ်တွင်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ပင် tablet များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော operating system ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
တကယ်တော့ဒီဗားရှင်း ၃.၀ ဟာတက်ဘလက်တွေနဲ့လုံး ၀ သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် Google ၏ဤဈေးကွက်ကဏ္segmentတွင်မှတ်သားဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်ဝစ်ဂျက်များနှင့်အတူမတူသော multitasking စနစ်အပြင်ပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုထားသောပုံစံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်ချဲ့ထွင်ရန်အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။
လများစွာကြာပြီးနောက်၊ ၂၀၁၁ အကုန်၊ အထူးသဖြင့်အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် ၂၀၁၁ တွင် operating system ဗားရှင်း ၄.၀ ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Android ဗားရှင်းကအရာအားလုံးကိုပေါင်းစည်းဖို့ခေါ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုဖုန်းတွေရောတက်ဘလက်တွေပါသုံးနိုင်လို့ပါ။ ၎င်းသည် operating system အတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုအစပြုခဲ့သည်။
အမြင်အားဖြင့်၎င်းသည် Google အတွက်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ဝစ်ဂျက်များ၊ မျက်နှာပြင်ခလုတ်များနှင့်အမူအယာများဖြင့်သတိပေးချက်များကိုရှင်းလင်းနိုင်ခြင်းစသည့်အင်္ဂါရပ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Android Beam ကိုဈေးကွက်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာခြင်းကိုလည်းမှတ်သားထားပါတယ်။ Motorola သည် Moto RAZR ကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များနှင့်အတူယခုအချိန်တွင်ထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အန်းဒရွိုက် 4.1 Jelly Bean ကို
၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သော operating system ၏ version သည်ယခုအချိန်အထိလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းဈေးကွက်တွင်အများဆုံးနေရာယူထားသည့်ကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်။ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားသည်။ အသုံးပြုမှုအများကြီးပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။
Voice command များနှင့် Google Now ကိုရောက်ရှိခြင်းသည် Android Jelly Bean တွင်အလွန်အရေးပါသောအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အသိပေးချက်များတိုးတက်ခဲ့ပြီး Project Butter သည်လည်းရောက်ရှိလာသည်။ ၎င်းသည်စနစ်တွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Sony Xperia Z သည်ယခုအချိန်တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။ 13 MP ကင်မရာနှင့်ရေစိုခံနိုင်မှုကြောင့်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံး Android ဖုန်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အန်းဒရွိုက် 4.4 KitKat ကို
Android 4.4 KitKat သည်ယနေ့ခေတ်အသုံးပြုသူများနှစ်သက်ကြဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယနေ့ operating system ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချထားသည်။ ယနေ့ခေတ်လည်ပတ်မှုစနစ်၌ရှိနေဆဲဖြစ်သောသော့ချက်ကျသောနည်းပညာများကိုဂူဂဲလ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Ok Google command ရောက်ရှိလာခြင်းကိုမှတ်သားသည်။
ဒီဇိုင်းသည်၎င်း၏ဆင့်ကဲတိုးတက်မှုနှင့်အတူ ဆက်လက်၍ ပိုမိုသန့်ရှင်းပြီး interface ကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။ ထို့အပြင်အဆင့်မြင့်ဖုန်းများဖြင့်အဆင့်နိမ့်ဖုန်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဖန်သားပြင်ကိုအသံဖမ်းယူသည့်ကိရိယာများကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ နို ၀ င်ဘာလကစတင်ခဲ့သည့် Android version သည်အထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေသည်။ အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားတွေနဲ့ချန်ထားခဲ့တဲ့သူတွေထဲကတစ်ခုပါ။ Material Design သည်ဤ operating system ၏ဝင်ပေါက်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါတို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအပြောင်းအလဲကြီးပဲ။
၎င်းသည် 64-bit ပရိုဆက်ဆာအသစ်များရောက်ရှိလာခြင်းကိုလည်းဆိုလိုသည်။ အန်းဒရွိုက်ကသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ Multiscreen အထောက်အပံ့ကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Smartlock သည် operating system သို့ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် Project Volta ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၅ အောက်တိုဘာလတွင်ဆthe္ဌမမြောက်ဗားရှင်းသည်စျေးကွက်တွင်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်သောဗားရှင်း၊ ၎င်းတွင်ဂူးဂဲလ်သည်၎င်းတို့ operating system ဖြင့်၎င်းတို့ရရှိလိုသည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ အတော်လေးရှင်းလင်းသောအကြံဥာဏ်များရှိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုများကိုမိတ်ဆက်ပေးသည့်လမ်းကြောင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဒီဗားရှင်းမှာတော့ Android မှာရှိနှင့်ပြီးသားအရာကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဓိကအပြောင်းအလဲမရှိခဲ့ပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ တိုးတက်မှုများစွာရှိခဲ့သည်။ ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်လာခြင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းခွင့်ပြုချက်များကိုယခုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီ၊ SD card ကို Android ဖုန်းတွေဆီပြန်ပို့ပေးတယ်။ Google Now သည် On Tap ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ယနေ့ Google Assistant ၏အုတ်မြစ်များကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat
မကြာသေးမီလများအတွင်းကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသောနောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲ။ ၎င်း၏ရောက်ရှိမှုကို Google Pixel စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းခံရသည်။ Voice search သည်ဤ Android version အတွက်သော့ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမြန်ဘာသာစကားချိန်ညှိချက်များ။ များစွာသောအားဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်မှာ Multi- window ဖြစ်သည်။ Nougat နှင့်အတူရောက်ရှိနေပြီကြောင်းအရာတစ်ခုခု
ယခင်ဗားရှင်းကဲ့သို့ပင်ဂူးဂဲလ်သည် operating system တွင်ပါ ၀ င်သည့်ရှုထောင့်များစွာကို ဆက်လက်၍ တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်း၏တိုးတက်မှုသည်စျေးကွက်တွင်အတော်လေးနှေးကွေးသော်လည်း၊ တိုးတက်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံတို့ဖြင့်ကျန်ရှိသည့်ဗားရှင်းအဖြစ်လူသိများသည်။
အန်းဒရွိုက် 8.0 Oreo
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သောဤ Android ဗားရှင်းကိုလူအများစုကစမတ်အကျဆုံးအဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ Google Assistant ကို Android တွင်ပေါင်းစည်းပြီး၎င်းသည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ၏မဟာဗျူဟာတွင်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသည်။ ကြွင်းသောအရာအဘို့, သေးငယ်တဲ့တိုးတက်မှုစနစ်မှလာမယ့်ခဲ့ကြသည်။
Autocompleton တိုးတက်မှု၊ Picture-in-Picture Mode ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ ချက်ချင်းအက်ပလီကေးရှင်းများအပြင်သင်တပ်ဆင်စရာမလိုဘဲကြိုးစား။ ရသောဂိမ်းများနှင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဂူးဂဲလ် Pixel ၏ဒုတိယမျိုးဆက်နှင့်အတူလိုက်ပါလာတဲ့ version ။ Pixel2XL သည် Android တွင်ဖြန့်ချိမှုအရှိဆုံးနှင့်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။
အန်းဒရွိုက် 9.0 Pie
လတ်တလော operating system ၏လတ်တလော version ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Android တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေရန်အတုဥာဏ်ရည်ရှိသည့်ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် operating system ကိုနည်းလမ်းသစ်ဖြင့်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ အမူအရာတွင်ထင်ဟပ်စေသောအရာ။
ဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ထို့အပြင်၊ Notch သည်ဖုန်းများကြားတွင်ဘုံအရာတစ်ခုမည်သို့ဖြစ်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ Android စမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင်ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စနစ်နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုတွန်းအားပေးသောအရာ။
Android 12 beta ကိုတစ်ဆင့်ချင်း install လုပ်နည်း
Android 12 ၏ပထမဆုံး beta သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောသတင်းများ ...
Android 12 သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်များကိုတင်ပြသည်
၂၀၂၁ Google I / O အတွင်းမှာဂူဂဲလ်ကသူ့ရဲ့မိုဘိုင်း operating system Android 2021 ကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
Sony Xperia 1 နှင့် Xperia5သည်တည်ငြိမ်သော Android 11 ကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်
Sony သည်၎င်း၏ terminal နှစ်ခုသည်တည်ငြိမ်သော Android 11 version ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Sony ဖြစ်သည်။
por Ignacio Sala လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း .
Android ဟာအမြဲတမ်းကွဲနေခြင်းကြောင့်အမြဲတမ်းသွင်ပြင်လက္ခဏာများရှိလေ့ရှိပြီးထုတ်လုပ်သူအများစုရဲ့လျစ်လျူရှုမှုကြောင့် ...
သင်၏ဖုန်းကို Android 7.1 ဖြင့်စီမံပါက ၂၀၂၁ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလဲရမည်
Android 11 ကိုစတင်ရောင်းချ
စက်တင်ဘာလအစတွင် Google သည်နောက်ဆုံးပေါ် Android 11 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်ရှိလာသည်။
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
Android 11 သည်ဤလများအတွင်း developer ၏ကြိုတင်ကြည့်ရှုမှုများနှင့်အတူတိုးတက်လာသည်။
Android 11 ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည့် Xiaomi ဖုန်းများ၏တရားဝင်စာရင်း
por DaniPlay လွန်ခဲ့တဲ့ 12 လအတွင်း .
Xiaomi သည်တရားဝင်ဖိုရမ်များမှတစ်ဆင့် Android 11 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့်ဖုန်းများကိုမျှဝေလိုက်သည်။
Android 11 သည်သော့ခတ်မြင်ကွင်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကစားနေသောအယ်လ်ဘမ်ပုံကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
မိုဘိုင်း operating system တစ်ခုစီတွင်မတူညီသောစိတ်ကြိုက်ရွေးစရာများရှိသည်။ Android ကမြေပြိုမှုတစ်ခုဖြင့်အနိုင်ရသည်။ Android အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေနှင့် ...
2GB RAM ပါသောဖုန်းများကို Android 11 ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုခြင်းကို Google ကတားဆီးလိမ့်မည်
Google က Android 11 beta ကိုစတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးထုတ်ကုန်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုလမ်းညွှန်တွင် ...
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခန့်ကဂူးဂဲလ်မှ Google လိုချင်သော Project Treble (pun ရည်ရွယ်) ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
Android9Pie နှင့်လိုက်ဖက်သောဖုန်းများစာရင်း
Motorola သည် Moto Z, Z2 Play, G Plus4နှင့်အခြားအရာများကို Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်သည်
Android Oreo ကိုမွမ်းမံမှုသည် Xiaomi Mi A1 တွင်မအောင်မြင်ပါ
Google မရှိရင် Android ကိုစိတ်ကူးကြည့်လို့ရလား။ Eelo ကဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်
OnePlus5သည် Android Oreo သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုယာယီမရပါ
Android 8.1 အင်္ဂါရပ်များ Oreo ကိုသုံးစွဲသူများကအနည်းငယ်သာသိသည်
Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့်စမတ်နာရီများကို Google ကအတည်ပြုသည်
Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့် Samsung ဖုန်းများစာရင်း
Motorola သည် Android Oreo ကို Moto Z Play နှင့် Z2 Play တို့အကြားစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Android Wear ၂.၆ - အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်သို့ရောက်ရှိလာသည့်သတင်း
Force 7.0 ကို Huawei P9 Lite တွင် update လုပ်သည်